ကလေးရဲ့အရည်အချင်းကို ခိုင်မာစေဖို့ နည်းလမ်း (၈)ခု - Chit MayMay
Home Child Teaching ကလေးရဲ့အရည်အချင်းကို ခိုင်မာစေဖို့ နည်းလမ်း (၈)ခု
ကလေးရဲ့အရည်အချင်းကို ခိုင်မာစေဖို့ နည်းလမ်း (၈)ခု
ကလေးအများစုမှာ အထူးစွမ်းရည်တွေ ရှိကြပြီး ထိုစွမ်းရည်တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့က မိဘတွေရဲ့ အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မတို့ကလေးရဲ့ ဆုလက်ဆောင်တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်က သူတို့ငယ်ရွယ်တုန်းအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မေမေတို့အနေနဲ့ ကလေးတွေရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို ဘယ်လို အားဖြည့်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက်တစ်ချို့ကို မျှဝေလိုပါတယ်။
ကလေးဘဝရဲ့ ပထမနှစ်တွေ အတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့အိမ်မက်တွေကိို အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ အားပေးတဲ့ သူတို့ရဲ့ ကာရိုက်တာကို ခိုင်မာအောင် ပြုလုပ်ပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ထိုအရည်အချင်းတွေနဲ့ စွမ်းရည်တွေကို မြှင့်တင်ဖို့ အာရုံစိုက်တဲ့အခါ ဘယ်ဘာသာရပ်မှာ တော်သလဲဆိုတာကို လေ့လာခြင်းက ပဓါနကျပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးစိတ်အားထက်သန်မှုက သူတို့ရဲ့ အကြီးမားဆုံးအရည်အချင်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကလေးတွေရဲ့ စွမ်းရည်ကို ခိုင်မာစေဖို့ ဘာ့ကြောင့်အရေးကြီးသလဲ?
သူတို့ကောင်းစွာ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိပြီး သူတို့မှာ ကျွမ်းကျင်မှုတစ်ခုက အလွယ်ကလေးဖွံ့ဖြိုးလာတဲ့အခါ ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အရည်အချင်းကို အသိအမှတ်ပြုနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ- ဂီတတူရိယာ တီးခက်ခြင်း၊ ဘောလုံးကစားခြင်း၊ အထူးသဖြင့် သူတို့ရဲ့ အသက်အရွယ်အလိုက် လွယ်ကူစွာ ပန်းချီဆွဲနိုင်ခြင်း စသည်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေဟာ သူတို့ရဲ့ အရည်အချင်းတွေကို သိလာတဲ့အတွက် အတတ်ပညာနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သင်ရိုးညွှန်းတမ်း ပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကို တောင်းဆိုလာကြမှာပါ။ သူတို့ကို နားထောင်ပေးပြီး သူတို့ကိုယ်တိုင် ရွေးချယ်ခွင့်ပြုပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
“ကလေးတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ခိုင်မာလာစေဖို့ အကြံပေးချက်များ”
တစ်ချို့ကလေးတွေက ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းက သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေကို ပြည့်မီဖို့ သူတို့လုပ်ဆောင်နေတဲ့ အချို့သော လုပ်ဆောင်မှုတွေကို အရမ်းစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ကလေးငယ်တွေမှာ လှုံ့ဆော်မှု လိုအပ်ပါတယ်။ မိဘတွေအနေနဲ့ ကျွန်မတို့ဟာ သူတို့လုပ်တဲ့ လုပ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေမှာ အားပေးရပါမယ်။
၁။ သားသမီးတွေရဲ့ သိချင်စိတ် အားသာချက်ကို ယူပါ
ကလေးတွေရဲ့ သိလိုစိတ်ကို ပိုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက် ကျွန်မတို့ဟာ သင်ယူမှုကို လှုံ့ဆော်ပေးမယ့် သူတို့ရဲ့ သိလိုစိတ်နဲ့ တွေးခေါ်မှုတွေရဲ့ အားသာချက်ကို ယူဖို့ လိုပါတယ်။
၂။ အရည်အချင်း ထုတ်လုပ်ဖို့ စိတ်ခံစားမှုကိုသုံးပါ
သင်ဘာလုပ်လုပ် စိတ်အားထက်သန်မှု မရှိဘူးဆိုရင် သင်ယူခြင်းဆိုတာ ဖြစ်ပေါ်လာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီအချက်ကို စိတ်ထဲမှာထားပြီး ဖြစ်ချင်တာတွေ လုပ်ဖို့၊ အောင်မြင်ဖို့အတွက် ကလေးတွေအားလုံးမှာ လိုအပ်တာက စိတ်လှုပ်ရှားမှု ဖြစ်ပါတယ်။
၃။ ကလေးတွေရဲ့ အရည်အချင်းကို ခိုင်မာစေဖို့ သူတို့ရဲ့ ကြိုက်နှစ်သက်မှုကို လေ့လာပါ
ကလေးတွေရဲ့အတွေ့အကြုံ၊ စိတ်ဝင်စားမှု၊ ဦးစားပေးမှုနဲ့ စိုးရိမ်မှုတွေကို လေ့လာပြီး ဆန်းစစ်ပါ။ သူတို့ ဘယ် activities မျိုးကို အသည်းအသည်ဖြစ်နေသလဲ၊ ဘယ်အရာပေါ်မှာ သူတို့ မပျင်းမရိဘဲ နာရီပေါင်းများစွာ ကုန်ဆုံးနိုင်သလဲ? ဆိုတာကို နားလည်လာပါလိမ့်မယ်။ ထို activities တွေက သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုစွမ်းရည်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တာကြောင်် သူတို့ကို အားပေးသင့်ပါတယ်။
၄။ မတူညီတဲ့ အခြေအနေတွေမှာ အရည်အချင်းကို ဖွံ့ဖြိုးစေခြင်း
ကလေးတွေ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်မှု အခြေအနေအမျိုးမျိုးမှာ အရည်အချင်းတိုးတတ်စေဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဒါတွေက ကျောင်း၊ မိသားစု၊ အပန်းဖြေမှု၊ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုတွေ စသည်တို့ပါဝင်ပါတယ်။
၅။ အချိန်တိုင်း လှုံ့ဆော်ပါ
သင့်ကလေး activity တစ်ခုပြုလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာ သူတို့ကို ယုံကြည်စိတ်ချကြောင်း၊ သူတို့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေကို ပြည့်မီနိုင်မယ်ဆိုတာ သင်သိကြောင်း အသိပေးရပါမယ်။ ထိုသဘောမျိုးဖြင့် သင်ဟာ သူတို့ကို activity တိုင်းမှာ လိုက်ပါပေးပြီး အားပေးစကားပြောပေးရပါမယ်။ သူတို့ကို စိတ်ပျက်သွားစေနိုင်တဲ့အတွက် သူတို့ကို ဖိအားမပေးဖို့၊ သူတို့ပေးနိုင်တာထက် ပိုပြီးမတောင်းဆိုဖို့ သေချာရပါမယ်။
၆။ ကလေးရဲ့ အရည်အချင်းကို ခိုင်မာစေချင်ရင် သူတို့ကို ဖိအားမပေးပါနဲ့
ကလေးတွေကို သူတို့လုပ်သမျှမှာ အကောင်းဆုံး ဖြစ်စေချင်ကြတာ မိဘတိုင်းရဲ့ဆန္ဒဆိုပေမယ့် ကျွန်မတို့အားလုံးဟာ သင်ယူနိုင်ဖို့အတွက် အမှားတွေလုပ်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်း မေ့ထားလို့ မရပါဘူး။ သင်က သင့်ကလေးကို ပြီးပြည့်စုံတဲ့သူဖြစ်ဖို့ တွန်းအားပေးမယ်ဆိုရင် သူတို့ဟာ လုံခြုံမှုမရှိတဲ့ introverted လေးတွေအဖြစ် ပြောင်းလဲသွားပါလိမ့်မယ်။ ဒါ့အပြင် သူတို့က သူတို့ရဲ့ မပြည်စုံမှုကို သင်လက်မခံဘူးလို့ ထင်တာကြောင့် သင့်ကို အဝေးကို တွန်းပို့လိုက်နိုင်ပါတယ်။
၇။ သူတို့ရဲ့ စွမ်းရည်တွေနဲ့ လုပ်နိုင်စွမ်းကို လှုံ့ဆော်ပါ
ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်ဆိုတာ မွေးရာပါဖြစ်ပေမယ့် သူတို့အရည်အချင်းတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို မြှင့်တင်ဖို့ သင့်ကလေးရဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ စွမ်းရည်တွေကို အားပေးရပါမယ်။ တစ်ချို့အရာတွေကို သူတို့နှစ်သက်တာ တွေ့မြင်တိုင်း လေ့လာသင်ယူမှုကို အားပေးဖို့အတွက် လုပ်ရမယ့် activities တွေကို ညွှန်ပြပေးသင့်ပါတယ်။ ကျောင်းပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုမှာ စာရင်းသွင်းပေးတဲ့အခါတိုင်း သူတို့ကို တာဝန်သိစိတ်ထက် motivation နှင့်အတူ လုပ်ဆောင်ရန် အကြံပေးဖို့ မမေ့ပါနဲ့။
၈။ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်မြှင့်တင်မှုကို လေ့ကျင့်ခြင်းနှင့် အလေ့အကျင့်လုပ်ပေးခြင်း
အဆက်မပြတ်လုပ်တာမရှိဘူး၊ ပုံမှန်လုပ်တာ မရှိဘူးဆိုရင် သင့်ကလေးရဲ့ အရည်အချင်းက အလေးသာမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ လေ့ကျင့်ခြင်း၊ အလေ့အကျင့်လုပ်ခြင်းမှတဆင့် စွမ်းရည်ကို ကျွန်မတို့ မြှင့်တင်ပေးရတာကြောင့် သင့်ကလေးတွေဟာ သူတို့ရဲ့အရည်အချင်းတွေကို အမြဲတမ်းလုပ်ဆောင်နေရပါမယ်။
သင့်ကလေးမှာ ဘယ်အရည်အချင်းတွေ ရှိနေသလဲဆိုတာကို သင်တွေ့မြင်တဲ့အခါ လေ့ကျင့်ပေးခြင်း၊ အလေ့အထလုပ်ပေးခြင်းဖြင့် စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်ခြင်းက ထိုထူးခြားတဲ့ စွမ်းရည်ကို ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုနဲ့ ပိုမိုကျေနပ်စရာကောင်းတဲ့ ဘဝသို့ ပြောင်းလဲစေပါလိမ့်မယ်။
မေမေတို့ကလေးတွေကို သူတို့ရဲ့ အိမ်မက်တွေနဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေအကြောင်း ပြောပေးဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့ကို ချစ်ခြင်းမေတ္တာပေးပြီး သူတို့နဲ့ communication ကောင်းကို အမြဲတမ်း ထိန်းသိမ်းပါ။ သင့်ရဲ့ အမြဲတမ်းအဖော်ပြုပေးခြင်းနှင့်အတူ သူတို့ကို လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းကို အားပေးပါ။
Previous articleနို့တိုက်နေချိန်မှာ ချစ်မေမေတို့အော့အန်ရခြင်းအကြောင်းရင်း
Next articleကလေးငယ်တွေ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုဖြစ်စေအောင် မိဘတွေ ပြုလုပ်မိတဲ့ အချက် (၇) ချက်